သုံးဖက်မြင်အသွင်သဏ္ဌာန်ကိုဦးဆောင်မျက်နှာကျက်အလင်း,Led မျက်နှာကျက်အလင်း,Guzheng Town Led Home Decorative,Guangdong Led Home Decorative - တရုတ်နိုင်ငံ သုံးဖက်မြင်အသွင်သဏ္ဌာန်ကိုဦးဆောင်မျက်နှာကျက်အလင်း, ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း
သုံးဖက်မြင်အသွင်သဏ္ဌာန်ကိုဦးဆောင်မျက်နှာကျက်အလင်း. LED မျက်နှာကျက်အလင်းရောင်လ်တာစုံလင်သောအလင်းကိုရောက်စေဖို့လမ်း, အကျင့်စာရိတ္တ, သင်၏အာကာသမှတစ်ဦးထက်ပိုချောကြည့်ဖြစ်ကြသည်။ LED မျက်နှာကျက်အလင်းရောင်, အဆင်းလှမြင့်မားအလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်လက်တွေ့ကျကျပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ Lightology အစွန်းဖြတ်တောက်အမျိုးမျိုးမျက်နှာကျက် flush, မိုးလုံလေလုံ setting များကိုများအတွက်စွမ်းအင်ထိရောက်အလင်းရောင် ဖိတ်ခေါ်. , တောက်ပပေးအလင်းလ်တာ mount LED ပေးထားပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော Tech မှအလင်းပေးခြင်း, Artemide, Swarovski, Leucos, အ Lightology စုစည်းမှုနှင့်ထို့ထက် ပို. အဖြစ်ဒီဇိုင်နာအမှတ်တံဆိပ်ကနေအနီးကပ်မျက်နှာကျက်မီးလုံးမှ LED နှင့်သင်၏ခေတ်ပေါ် motif မှခေတ်မီထည့်ပါ။ သင်သည်အဘယ်သူ၏စကေးအခန်း၏အရွယ်အစားနှင့်အတူဟန်ချက်၌တည်ရှိ၏တစ်ဦးမျက်နှာကြက်ကရိယာကိုရှေးခယျြသေချာအောင်မဝယ်ခင်မှာ။( သုံးဖက်မြင်အသွင်သဏ္ဌာန်ကိုဦးဆောင်မျက်နှာကျက်အလင်း )
©2005-2018 Karnar ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ဆိုက်ကိုမြေပုံ Last modified: September 19 2020 03:20:15.